युरोप युरोप भन्छन नेपालीहरु पोर्चुगल मा रोडमै सुत्छन
प्रोचुगल खराव हैन खराव नेपाली हौ आज बिहानै खबर देखे नेपाली हरु पोर्चुगल मा रोडमै सुत्छन रे ! नेपाल बाट पढन भनेर UK आएका तर Uk ले कार्ड नदिएपछि लरि मा आयको लाई पनि कार्ड दियको छ । टर्की वाट लुक्दै लुक्दै आयको लाई पनि कार्ड दियको छ । डेनमार्क नर्वे मा फ्रान्स मा डिग्री गरेर त्यो देस ले ३५ दिन भित्र देस छोड भनेर भीषा रद्द गरेको लाई पनि कार्ड दियको छ ।
वेल्जीयम मा सरणार्थी केस फेल भयर आयको लाई पनि कार्ड दियको छ । होल्यान्ड मा हामी समलिङ्गी हौ भनेर झुटो विवरण दियर कार्ड नभयका लाई पनि पोर्चुगल ले कार्ड दियको छ । लियो लायन्स जेसीस कार्यक्रम को लागी युरोप आयर यतै लुकेका लाई पनि कार्ड दियको छ । साईप्रस इजरायल दुवई कतार हुदै आयको लाई पनि कार्ड दियको छ । ७ महीना को गर्भ सगै आयको दम्पत्ती हरु को
सोसियल र फिनान्स र जुव्ता कै आधार मा नि सुल्क मा डेलीभरी गरायको छ अस्पताल मा नि सुल्क ऊपचार गरेको छ । कार्ड वनेको ५ वर्ष पछी पासपोर्ट लियर युरोप ळगायत अन्य देस मा पनि गयर काम गर्ने कमाऊने अवसर दियको छ । नेपाल मा बङ्सज आधार मा नागरिक्ता लिन १८ बर्स हुनु पर्छ भने बसोबास अनुमति पत्र भएको मिति ले ५ बर्स मा पोर्चुगल को नागरिक हुने अधिकार दिएको छ ।
इराक बाट पलास्टिक को डुङ्गा चढदै मरे खान्छ माछा ले बाचे पुगिन्छ पोर्चुगल भनेर आउने लाई पनि कार्ड दिएको छ । यती गर्दा पनि पोर्चुगल गलत भन्ने हरु लाई हामी के भनौ ??? 🇵🇹 गल्ती नेपाली र आप्रवासी को दोष पोर्चुगल लाई ? पोर्चुगल मा नेपाली लाई ठग्ने नेपाली अनि एक नेपाली ले अर्को नेपाली लाई पछार्ने अनि दोष चै पोर्चुगल ठिक
छैन रे । आषण भाषण गर्ने नेपाली तर दोष चै पोर्चुगल लाई काम गर्ने तलव नदिने नेपाली अनि दोष चै पोर्चुगल मा तलव पाईदैन रे । सोसियल किन वेच गर्न सिकाऊने एसीयन अनि दोस पोर्चुगल लाई अबैध सम्बध राख्ने बच्चा जनाउने र फोहर हाल्ने भाडोमा लगेर जिउदै बच्चा फाल्ने अनि दोष चै पोर्चुगल लाई । नोट:- यो पोस्ट कसैले ले आफ्नो फेसबुक बाल मा सियर गरेको थियो सोही पोस्ट सेम एता सारेको मात्रै हो ।